Tuulooyinka oo ah meherado waddada u xaaraya bulshooyinka Kariibiyaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caribbean » Tuulooyinka oo ah meherado waddada u xaaraya bulshooyinka Kariibiyaanka
Safarka Ganacsiga • Caribbean • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Jamaica waxaa lagu calaamadeeyay HOME OF TOULISM COMMUNITY Machadka Caalamiga ah ee Nabadda iyada oo loo marayo Dalxiiska (IIPT) maaddaama ay tahay meeshii ay hormuudka ka ahayd 45 sano kahor Diana McIntyre-Pike milkiilaha/hawlwadeenka Astra Country Inn Mandeville markaas iyo Desmond Henry , Agaasimihii hore ee Dalxiiska. Waxay si wada jir ah u abuureen Shabakadda Dalxiiska Bulshada ee Countrystyle (CCTN) si loo horumariyo dalxiiska bulshada inta badan xeebta koonfureed ee Jamaica.
Shabakadda Dalxiiska Bulshada Countrystyle waxay heshay aqoonsi gudaha iyo dibaddaba ah.
Diana McIntyre-Pike waxay heshay abaalmarino dhowr ah oo loogu talagalay hindisahan.
Barnaamijka Tuulooyinka sida Ganacsiyada (VAB) ayaa muddo shan maalmood ah ka fulinayey Tababar Marti-gelin Ganacsi Ganacsi dhowr beelood oo ku yaalla Jamaica iyo gobolka Kariibiyaanka.
Sanadihii ugu dambeeyay, CCTN waxay samaysay urur xubin-nimo oo aan macaash doon ahayn oo lagu magacaabo VILLAGES AS BUSINESSES (VAB) kaas oo helay aqoonsi gudaha iyo dibaddaba ah. Shabakadda Dalxiiska Bulshada ee Countrystyle waa xubin ka mid ah Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN), iyo Diana McIntyre-Pike waxay heshay abaalmarino dhowr ah oo loogu talagalay hindisahan, kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2020 oo ka yimid WTN-ka cusub oo ka mid ah 17 xirfadlayaal Dalxiis oo la siin doono abaalmarin caalami ah Abaalmarinta Geesiyaasha Dalxiiska, barnaamij abaalmarin qaali ah.
Barnaamijka Tuulooyinka sida Ganacsiyada (VAB) ayaa muddo shan maalmood ah ka fulinayey Tababar Marti-gelin Ganacsi Ganacsi dhowr beelood oo ku yaal Jamaica iyo gobolka Kariibiyaanka kaas oo hadda ay shahaado ka heshay Jaamacadda West Indies (UWI) Campus Furan. Tababarku wuxuu daboolayaa horumarinta shaqsiyeed, cilmi -baarista hantida jirta iyo tan suurtagalka ah, wacyiga deegaanka, socdaalka iyo xulashada badeecada, horumarinta ganacsiga, amniga iyo borotokoolka COVID. Mid ka mid ah ururada Jaaliyadaha ee Jamaica, Making Connections Work UK, ayaa taageeray VAB iyo suuq -geynta DHAQAALAHA DHAQAALAHA BULSHADA sida dalladda u soo dhowdahay.
Marxuum Desmond Henry
Shabakadda Dalxiiska Bulshada ee Countrystyle (CCTN) ayaa dhawaan go'aansatay inay yeelato Jaaliyadaha Jamaica iyo Caribbean -ka sidii maalgashigooda iyo la -hawlgalayaasha suuqgeynta. Waxay abuurtay sanduuq u gaar ah dalxiiska beesha oo la yiraahdo COMFUND oo leh Guddi Qurbajoog ah oo ku -meelgaar ah. COMFUND hadda waxay ka diiwaangashan tahay USA waxaana hadda lagu dhammaystirayaa hay'ad maaliyadeed si loo fududeeyo deeqaha iyo maalgashiga suurtagalka ah. Dulsaarka COMFUND wuxuu taageeri doonaa amaahda dulsaarka hooseysa wuxuuna siin doonaa maalgelin loogu talagalay u -qalmitaanka mashaariicda horumarinta bulshada ee waara oo ay soo gudbiyeen xubnaha Tuulooyinka sidii Ganacsi ahaan. Dhammaan mustaqbalka CCTN Fasaxyada Hab -nololeedka Bulshada iyo Safarrada waxaa ku jiri doona tabarruca COMFUND.
Wadashaqayn ayaa hadda lagu soo gabagabeeyey madal dalabka moobiilka ah ee Ururka Qurba -joogga Kariibiyaanka ah oo la yidhaa TravelJamii kaas oo la soo saari doono Sebtember 2021. App -ka TravelJamii wuxuu awood u siinayaa Bulshada Caalamiga ah inay la kulmaan wax kasta oo Kariibiyaanka ah, iyadoo kor u qaadaysa dalxiiska, dalxiiska bulshada, magacyada waaweyn, ganacsiyada maxalliga ah , soojiidashada, dhacdooyinka, cunnada, taariikhda, dabeecadda, wararka iyo qaar kaloo badan.
Dr. Samuel Lee Hancock, CM wuxuu leeyahay,
September 2, 2021 at 20: 58
Galab wanaagsan oo ka timid Washington, DC Diana! Waa maxay Kariibiyaanka cajiibka ah iyo daboolida adduunka oo dhan ee “Tuulooyinkaaga sida Meheradaha” oo qayb ka ah Shabakadda Dalxiiska Bulshada Waddanka (CCTN). Kaagu waa dhaqdhaqaaq awood leh oo ka jira Jamaica iyo guud ahaan 34 dal, dhulal, iyo ku tiirsanaanta Kariibiyaanka. Waa maxay wacyi-gelinta caalamiga ah ee weyn iyo daboolida madal horumarineed oo kuu gaar ah oo ku salaysan bulshada.
Hadda waxaa la joogaa waqtigii laga wada hadli lahaa Wada -shaqaynta Caalamiga ah ee Yachting Fellowship of Rotarians (IYFR) ee Kariibiyaanka iyo Laatiin Ameerika ee Fleets soo -jeedinta si loo daboolo dhammaan dooxada Kariibiyaanka ee TV -ga EmeraldPlanet. Kuwani waxay noqon doonaan kuwa baahin doona maalin kasta gudaha iyo dibaddaba. Qaab -dhismeedka bulshadaada iyo agritourism -ka ayaa runtii keenaya isgaarsiinta, fahamka, ganacsiga, xoojinta haweenka iyo bulshada, iyo nabadda Kariibiyaanka iyo adduunka oo dhan.
Halkaan ku wadaaga barnaamijkaaga telefishanka, Bandhigyada, iyo Podcast -yada ururadaada aadka u wanaagsan…
(Haddii URL -ka aan la xiriirin oo kaliya nuqul oo ku dhaaf biraawsarkaaga shabakadda. Ku raaxayso safarkaaga!)
Cinwaanka: “Hoggaaminta Haweenka ee Bulshooyinka ku beddelaya Waxbarashada Hal -abuurka iyo Beeraha Joogtada ah”
Mu'asasada Caalamiga ah ee EmeraldPlanet URL URL Barnaamijka YouTube:
Muuji '1' Mawduuca: "Wadada loo sii maro Dalxiiska Dhaqaalaha Bulshada ee Jamaica iyo Kariibiyaanka" https://www.youtube.com/watch?v=hHfPMvROzuw
Muuji '2' Mawduuca: "Tababbarka Hoggaanka Haweenka & Tababbarka Hal -abuurka ee Ganacsiyada Dalxiiska Ku -saleysan ee Bulshada" https://www.youtube.com/watch?v=GmBh80ZLTXY
Muuji '3' Mawduuca: "Dumarku waxay hoggaamiyaan Beeraha Ganacsiga Dabiiciga ah ee Beelaha" https://www.youtube.com/watch?v=vXxYeYdh5bI
Muuji '4' Mawduuca: "Ixtiraamida Farsamada Gudaha iyo Hab -nololeedka"
“Hoggaaminta Haweenka ee Beddela Bulshooyinka iyada oo loo marayo Waxbarashada Ganacsiga iyo Beeraha Joogtada ah” Podcast: https://open.spotify.com/episode/3AV2XKvJiNzAzN4o6cBUf8?si=fyq35DBOThmwI7P1M0XFbg&nd=1
Dad badan ayaa u rajaynaya Diana warbaahintan cajiibka ah iyo kuwa kale oo badan oo mustaqbalka laga abuuri doono “Tuulooyinkaaga sida Meheradahaaga” oo qayb ka ah Shabakadda Dalxiiska Bulshada ee Countrystyle (CCTN) annaga oo wadajir ah ayaan u abuurnaa EmeraldPlanet ©.